DP World oo sheegtay in ay la shaqeyneyso shirkadaha Israel | Burconews
DP World oo sheegtay in ay la shaqeyneyso shirkadaha Israel
September 20, 2018 - Written by Admin
Dawladda Dubai ayaa si rasmi ah ugu biiri doonta xayiraadda Carabta ee Israel, laakiin shirkad dawladeed oo ku taala xarunta dhexe ee muranku ka taagan yahay dalabkeedii ahaa in la qabto hawlaha dekedaha Maraykanka ayaa sheegay inay si joogto ah ula shaqeeyaan shirkadaha Israel.
Waa wax iska hor imanaya gobolka oo dhan: Qaar badan oo ka mid ah waddamada Khaliijka, gaar ahaan kuwa soo galaya suuqyada caalamka, badi waxay iska indho-tirayaan qulqulka xitaa haddii aysan si rasmi ah u dhicin, mana aqoonsana Israa’iil.
Dalalka sida Imaaraadka Carabta, oo Dubai ay qayb ka tahay, ayaa sidoo kale soo gabagabeeyay heerarka labaad, taas oo macnaheedu yahay in alaabada Israel ee aan si toos ah looga soo dirin dalka Israa’iil loo oggol yahay inay soo galaan suuqooda imaaraate .
Qaar ka mid ah golaha Senatka Mareykanka ayaa su’aasha usbuucan ku soo rogay su’aasha ah in ay ku noqotay kacdoon cusub oo ku yimid in ay u ogolaatay Dubai Ports World in ay ka hawl gasho xarumaha dekedda ee dhowr magaalo oo Mareykan ah oo halis ammaan ah. Sharciga Maraykanku wuxuu mamnuucayaa shirkadaha inay iskaashi la sameeyaan.
DP World waxa iska leh Dawladda Dubay, oo buugaagtiisuna ay taageertay xayiraad toban sano jir ah. Hase yeeshee, khatartu waxay hoos u dhacday tobannaan sano, iyada oo UAE aysan ku qasbin DP World in ay ka dhigto badeecadaha Israel iyo shirkadaha ka yimaada dekadaha Europe, Asia iyo Mideastka.
CNN ayaa Khamiistii shaaca ka qaaday in shirkad macaamiish ah oo macaamiil ah oo loo yaqaan ‘ZIM Integrated Shipping Services Ltd.’ ay u dirtay Senator Mareykanka ah oo sheegaysa in ay ganacsi la leedahay DP World oo taageerto heshiiska Maraykanka.
“Shirkad Israel ah oo ammaanka ah ayaa ah tan ugu muhimsan ee nagu filan, waxaanan u baahanahay tallaabooyin ammaan ah oo adag oo ka imanaya dadka ku shaqeeya terminaalka ee ka shaqeeya waddan kasta oo aan ka shaqeyno, gaar ahaan dalalka Carabta, waxaanan aad uugu soo dhaweyneynaa dekedaha Dubai ee DP” Guddoomiyaha ZIM Idan Ofer ayaa qoray, sida shabakadda wararka ee cable-ka.
Warqadda ayaa sheegtay in ZIM loo oggol yahay in uu ka shaqeeyo dekedaha Dubai inkastoo ay ka muuqato xayiraadda rasmiga ah iyo in DP World uu hawlgallada ZIM-du ku qabato Dubai, sida ay sheegtay CNN. Ofer ma sheegin haddii howlgallada ZIM ay yihiin kuwo hoos yimaada ama toos loo leeyahay.
Sharciga Imaaraadka Carabta, ganacsiga u dhexeeya todobada emirate iyo Israa’iil waa la mamnuucay, dadka haysta baasaboorka Israel looma ogola UAE. Shirkad kasta oo ay leedahay dawladaha amiirrada ayaa sidoo kale loo malaynayaa in ay ku adeecaan qaadacaadda, inkastoo aan si cad loo hirgelin.
Dunida DP hadda waxay ka kooban tahay 15 xarumood oo ka baxsan dunida Carabta – Asia, Europe iyo Latin America – mana jiraan wax warar ah oo soo baxaya oo ka soo horjeeda maraakiibta Israel, maraakiibta ama shirkadaha ka shaqeeya halkaa.
“Shirkadayadu waxay leedahay xiriir ganacsi oo muddo dheer ah oo lala galo shirkadaha Israel oo ka mid ah macaamiisheenna kala duwan ee kala duwan,” ayuu yiri Madaxweyne Ku-xigeenka DP World Michael Michael Moore.
“DP World ma takooraan mana lagu soo oogin in ay ku xadgubeen xeerarka ka hortagga qashin-qaadista.” DP World, oo ah shirkad caalami ah oo maareynta dekadda, ayaa fududaynaysa ganacsiga dalal badan, “ayuu yiri.
Xafiiska Moore ayaan si dhakhso ah uga jawaabin codsi Khamiistii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shirkadaha Israel ee la shaqeeya DP World.
Xafiiska Dunida DP ee Dubai ayaa diiday in ay faallo ka bixiyaan khilaafka khamiistii, sidaasi oo uu ku sheegay madax sare oo ka tirsan xukuumadda UAE ee caasimadda, Abu Dhabi.
Moore ayaa sii daayay war saxaafadeed ka soo baxay golaha Senate-ka kadib markii uu soo saaray sarkaal sare oo ka tirsan hoggaanka DP World Edward Bilkey, oo ku saabsan heshiiska shirkadda Israel. Bilkey ayaa qiray in dawlada Dubai ay si rasmi ah u ixtiraamayso qaadka.
“Waa inaanan ku fiicneyn shirkadaha taageera takoorka ka dhanka ah isbahaysiga istiraatiijiga ah ee muhiimka ah,” Sen. John Kerry ayaa sheegay intii lagu jiray dhegeysiga Guddiga Ganacsiga ee Senate-ka.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa bilaabay qulqulka Israel ee 1951-kii, kaas oo ka furay magaalada Damascus, Syria, si ay u aqoonsadaan ajaaniibta ganacsi la leh waddanka Yuhuudda isla markaana mamnuucaya inay ka hawlgalaan dunida Carabta.
Hal mar, in ka badan 8,500 oo shirkadood iyo dad, sida Coca-Cola iyo Ford, ayaa liiska madow galay . Hase yeeshee, qulqulatadu waxay noqotay midkii ugu horreeyay ee Masar iyo Jordan ka dibna nabadda la dhigto Israel iyo Falastiiniyadii waxay bilaabeen geedi socodkii nabadgelyada. Saddexdiiba waxay la wadaagaan Israa’iil.
UAE, Qatar, Tunisia iyo Morocco ayaa ka mid ah wadamada kale ee Carabta ee xiriirka la leh Israel iyo ganacsigooda sanadihii la soo dhaafay – inkastoo aysan si rasmi ah u aqoonsan Israa’iil.
Suuriya iyo Lubnaan ayaa wali si adag u dhajinaya qamriga, iyo xafiiska Damqaatiga ee xannibaadda ayaa si joogto ah u soo saara qoraallada madow.
“Muhiimada (qaadka) waa mid siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo ka badan maalintaan maaliyadeed,” ayuu yiri Michael Oren, oo booqasho ku yimi khudbadii Yahuuda iyo Bariga Dhexe ee Harvard iyo saaxiib kale oo ka tirsan xarunta Shalem, oo ah machad cilmi baaris oo ku salaysan Yeruusaalem.
xigasho Fox news